६ वर्षसम्म सँगै बसेकी सुशान्तकी पूर्व प्रेमिका जब परिवार भेट्न पुगिन् …. – Jagaran Nepal
६ वर्षसम्म सँगै बसेकी सुशान्तकी पूर्व प्रेमिका जब परिवार भेट्न पुगिन् ….
बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतको सोमबार नै दाहसं स्कार गरिएको थियो । विले पार्लेस्थित पवन हंस श वदाह गृहमा परिवारका सदस्य र फिल्मकर्मीको उपस्थितिमा अन्तिम सं स्कार बुबा र बहिनीले दा गबत्ति दिएर गरेका थिए ।
सुशान्तको आ त्मह त्या प्रकरण अहिलेसम्म अनुसन्धानमा छ। प्रहरीले यस सन्दर्भमा सुशान्तका घनिष्ठ मित्रहरू रिहा चक्रवर्ती र महेश शेट्टीलाई सोधपुछ गर्ने छ।
सोमबार उनलाई अन्तिम बिदाई गर्न बलिउडका धेरै कलाकर्मी भेला भएका थिए त त्यस्मा ६ वर्ष लिभिङ्ग रिलेशनसिपमा बसेकी उनकी पुर्वप्रेमिका अंकिता लोखन्डे पुगिनन् । उनीहरु “पवित्र रिस्ता”बाट चर्चामा आएका थिए । तर मंगलबार अंकिता सुशान्तको परिवारलाई भेटेर स मवेदना दिन सुशान्तको बान्द्रा अपार्टमेन्टमा पुगेको फोटोहरु बाहिरिएको छ ।
सुशान्तको परिवारमा अर्को बज्रपात, देवरको मृत्युको पीडाले भाउजुको पनि निधन बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतले आ त्मह त्या गरेको घटनाले बलिउड क्षेत्र शोकमा परिरहेको बेला उनको परिवारमा अर्को बज्रपात परेको छ ।